XDA FORUMS pro v1.2 APK - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Reader XDA FORUMS pro v1.2 APK
Maung Pauk at 10:58:00 AM Android Application, Reader,
ဖုန်း Service သမားတွေ၊ Developer တွေ မှီငြမ်းလေ့လာကြသလို့ အဲဒီမှာ ပို့စ်လည်း တင်ကြတဲ့သူများအတွက် ဖုန်းကနေ ဝင်လို့ရတဲ့ Forum XDA အတွက် XDA FORUMS pro v1.2 APK ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖုန်းထဲကနေ ပို့စ်ဖတ်ခြင်း၊ Data Download ရယူခြင်း၊ Post ရေးသားခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
[ ဖုနျး Service သမားတှေ၊ Developer တှေ မှီငွမျးလလေ့ာကွသလို့ အဲဒီမှာ ပို့ဈလညျး တငျကွတဲ့သူမြားအတှကျ ဖုနျးကနေ ဝငျလို့ရတဲ့ Forum XDA အတှကျ XDA FORUMS pro v1.2 APK ကိုတငျပေးလိုကျပါတယျ.. ဖုနျးထဲကနေ ပို့ဈဖတျခွငျး၊ Data Download ရယူခွငျး၊ Post ရေးသားခွငျးတှကေို လုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ.. ]
Many More Cool stuff
removed ads bug!
xda news blog added !
get updates from xda news !
UI tweaked !
Big Fixes !
new theme (xda dark) !
Android Application, Reader